Marxuum Abwaan Xasan Sh.Muumin oo si weyn loogu aasay Boorama | WWW.SOMALILAND.NO
Marxuum Abwaan Xasan Sh.Muumin oo si weyn loogu aasay Boorama
Oslo(somalilnd.no) 27-Jan. 2008–Aaskii Marxuum Abwaan Xasan Sh.Muumin ayaa maanta si aad iyo aad u weyn uga dhacay magaalada Boorama, Marxuumka meydkiisa ayay keentay diyaarada Daalo oo ka soo qaaday wadanka Jabuuti 11.30 Aroornimo.
More…Markii laga soo dejay diyaarada waxa saarnaa meydka marxuumka bilada dhaqanka ee jamhuuriyada Jabuuti, taas oo lagu saaray marxuumka madaarka jabuuti sida uu sheegay La Taliyaha Arrimaha Dhaqanka ee Madaxweynaha Jubuuti, Xaashi Cabdillaahi Orrax, oo isagu diyaarada meydka siday la socday.
Wuxu sheegay Orrax in dawlada Jabuuti ku maamuustay bilada ugu daraja saraysa ee 3aad ee la yidhaa BAAL,taas oo saaka wasiirka dhaqanka ee Jabuuti Cali Cabdi Faarax saaray marxuumka.
”Waxa kale oo aan sidaa,” ayuu yidhi Orrax “wareegtadii uu ku bixiyay M/weyne Ismaaciil Cumar Geele biladaas Dahabka ah oo aan gudoonsiin doono Ehelka Marxuumka.”
Meydka Marxuumka ayaa la saaray calanka Somaliland oo keli ah, Calankana waxa saaray shaqsiyaad is xilqaamay iyo badhasaabka, Intaas ka dib waxa Marxuumka lagu tukaday salaatu Janaasada oo ay ku tukadeen boqolaal qof oo iskugu jira madaxda dawlada, kuwa mucaaradka iyo qaybaha bulshada ee kala duwan. ka dib waxaa Marxuumka soo gelbiyey boqlaal baabuura waxaana lagu aasay maqaamkii Aabhii Sh. Muumin Gorad oo ku yaala xaafada Axmed/Guray ee Boorama.
Aaska Marxuumka waxa joogay saddex Wasiir oo kala ah Wasiirka Madaxtooyada, Nuur Aamin, Wasiirka Warfaafinta, Axmad Xaaji Daahir iyo Wasiirka Macdanta iyo Biyaha, Qaasim Sheekh Yuusuf. Waxa intaas weheliyay Madaxda Maamulka Awdal. Dhanka kale waxaa si weyn u yimid madaxda xisbiga Kulmiye oo uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Axmed Maxamed Siilaanyo, halkaas oo ay ku wehelinayeen madaxda xisbiga ee heer Qaran iyo gobol. Waxa iyaguna joogay aaska Marxuumka xildhibaano ka socday labada gole iyo fanaaniin iyo Abwaano.
Weftiga ka socday Jabuuti ayaa tiradoodu dhamayd 12 xubnood oo iskugu jiray saraakiil iyo xubno rayid ah.
Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye oo saxaafada la hadlay isaga oo jooga garoonka diyaaradaha ee Boorama intii meydka aan la keenin ayaa isagu yidhi, “Inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun, Ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu naxariistii jano ka waraabiyo, ehelkiisiina samir iyo iimaan ka siiyo, Xasan sh.muumin maaha nin reer Awdal iyo Somaliland ka baxay ee wuxuu ka baxay Soomaali oo dhan, waana nin soomali oo dhan taariikh ku leh, waa nin hal abuur leh, waa abwaan caana, fikir dheer lahaa, heeso badan iyo hal abuur badan ka tegay.”
“Waxaanad odhan kartaa wuxuu ahaa macalin umadeed, waad arkayseen sida meel walba la iskaga yimid, Jabuuti laga yimid, taasi waxay ina tusaysaa shaqsiyada uu Abwaan xasan Sh.Muumin ahaa, ilaahayna waxaan uga baryaa naxariis mar labaad,” ayuu hadalkiisa ku gebagabeeyey.
Wasiirka warfaafinta ayaa isna sheegay in ay samayn doonaan ururinta Taariikhda marxuumka isla markaana ay idaacada Hargaysa iyo TVgaba ka sii dayn doonaan barnaamijyo ku saabsan suugaantisii iyo taariikhdii uu lahaa.
Maxamed Rashiid Sh.Xasan oo ah nin Aqoonyahan ah in badana waraysiyo ka qaaday Marxuumka ayaa ku sheegay in uu ahaa nin Faylasuuf ah, oo ka aragti dheeraa dadka uu la joogo, wuxuu intaas raaciyay M/rashiid in ay dhawaan Hargaysa ka samaynayaan hal habeen oo la yidhaa habeenkii Xasan Sh. Muumin laguna soo bandhigi doono suugaantisii iyo fankii uu lahaa Marxuumku. isla markaana ay samayn doonaan Xarunta dhaqanka ee Abwaan Xasan Sh.Muumin.
Abwaan Daahir Xadi ayaa isaguna ku sheegay Marxuumka in uu ahaa nin fikir dheer isla markaana uu ahaa macalin xaga dhaqanka diinta ku salaysan ah, wuxuu ahaa tafsiiriye ama is fahamsiiye hadala sarbeebta ah ee margiyaysan ee ay dadka qaar ku hadlaan, suugaantiisu waxay iskugu jirtay mid ka hadlaysa tacliinta, wadaniyada iyo wadan jacaylka, dibna waan ka sharixi doonaa suugaantiisa iyo wixii aan ka baranay.
Ismaaciil Muumin Aare ayaa isna ka tacsiyadeeyay umada Af-Somaliga ku hadasha dhimashada Marxuumka, wuxuuna yidhi nin weyn oo ummada soomaliyeed ka baxay weeyi, ummada soomaaliyeedna samir Allah ka siiyo “Xasan Sh. Muumin wuu nool yahay wixii uu ku waanin jiray iyo hadaladii uu inooga tegay ayaa nool weli, markaas wuu nool yahay,” ayuu yidhi Ismaaciil.
Marxuumka dadka ka hadlay taariikhdiisa iyo hal abuurkiisa aad ayay u badnaayeen, waxa kale oo aad u badnaa gaadiidka lagu galbinayay Marxuumka kuwaas oo ka kala yimid gobolada Somaliland.
Weftigii ka yimid dhanka Jabuuti ayaa caawa u hoyday magaalada Boorama iyaga oo ka duuli doona madaarka Boorama berri Axada. Dhanka kale imaatinkii M/weynaha ama M/xigeenka ee ay sugayeen dadweynaha reer Boorama ayay waayeen, taas oo ay dadku aad isku weydiinayeen sababta ay Dawladu u weynayn weyday maamuuska aaska Marxuum Xasan Sh. Muumin, dad badan oo saluugsan ayaanan la kulmay habka ay xukuumadu uaga soo qayb gashay Aaska.
« Wararka wergeyska OGAAL, Cadadka Axadda Hundreds of people attend the funeral of Hassan Sheikh Mumin in Borama »